Wanga uchiziva here kuti kune akavhurika sosi kiyibodi? | Linux Vakapindwa muropa
Huye, iwo musoro wenyaya mubvunzo unganzwika zvisina musoro kune vamwe vaverengi, nekuti ivo vaito vaziva. Chaizvoizvo hachisi chinhu chitsva, asi sezvo tisina kutaura nezvazvo mune ino blog, ndinoda kutaura nezverudzi urwu yakavhurwa sosi kana yakavhurika makhibhodi izvo zvinogona kukubatsira iwe zvakawanda kuti ugadzire yekuisa yekushandisa iyo ine hushamwari kune hunhu hwako kana tsika. Ichokwadi ndechekuti kune akati wandei anonakidza mamodheru kusarudza kubva.
Aya keyboards, pamusoro pekuve ergonomic uye nekupa iwo mabasa ayo chero imwe keyboard inogona kupa, zvakare zvakare inochinja kana uchigadzirisa nekugadzirisa iwo chero chaunoda. Kune akatiwandei marudzi, senge emuchina, pamwe neRGB mwenje kune avo vanofarira modding kana vatambi, nezvimwe.
Kunyanya kwandiri Ndinoda kujekesa 2 eaya akavhurwa sosi mamaki, kunyange paine mamwe mamodheru aunogona kutsvaga:
ErgoDox EZ: chinhu chekutanga chinomiririra ndechekuti chakakamurwa kuita mahafu maviri kuitira kuti iwe uzviise pachinhambwe chakanakira iwe. Vamwe vanhu vakawedzera upamhi, vamwe vanosarudza kuita kuti maoko avo aswedere padyo, nezvimwe, asi nekiyi keyboard iwe unogona kuzviita zvisinei iwe zvaunoda. Zvakare, unogona dhawunorodha schematics kubva kuGitHub. Sezvandamboreva, ndeye ergonomic modhi kuitira kuti hutano hwako husatambure kana uchiishandisa uye nerudzi rweQWERTY. Iyo zvakare ine mamwe maviri makiyi anozivikanwa seHyper neMeh ayo anotendera iwe kuti uite imwe-ruoko kiyi musanganiswa wemakhibhodi mapfupi. Zvakaipa? Zvakanaka, zvakaoma kuwana, haina Ñ sezvo isiri yeSpanish uye mutengo wayo unodhura ... anenge € 270.
K mhando: mune ino kesi, iwe une michina keyboard ine RGB mwenje, kusvika parizvino zvese zvakajairwa. Asi zvakare iri yakavhurwa sosi. Zvakare mutengo uye kushomeka kwekudawa ndizvo zvipingamupinyi zvaro zvikuru, sezvo iine zvakare kukosha kweanosvika € 200. Mune ino kesi haina kupatsanurwa nepakati, iri muchidimbu chakafanana neyakajairika dhizaini, asi ine tenkeyless keyboard ine aruminiyamu casing uye yakarongedzwa firmware kuti ugone kushandisa akati wandei marongero akasiyana uye akasarudzika mapfupi. Iwe zvakare uchawana isingaperi rollover (N-kiyi) uye maviri akakosha kukanganisa. Yekutanga ndeye Halo Yechokwadi iyo inoteedzera iyo Topre capacitive switch. Yechipiri ndiHalo clear inova mhando yakagadziriswa yeCherry MX Yakajeka.
Ndinovimba kuti dai wanga usingavazive, ndakuratidza zvishamiso izvi muchinyorwa chino ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Wanga uchiziva here kuti kune akavhurwa sosi kiyibodi?
Rumbidzai Chinyemba (@RumbidzaiChitenda) akadaro
Pindura kuna LgtTesla (@LGTTesla)
Ubuntu 18.04.3 LTS iri pano neLinux Kernel 5.0